शाकाहारी काम छैन भन्नुको अर्थ चिकेन चिल्ली खान खोजेका हैनन् होला त : प्रधानमन्त्री : RajdhaniDaily.com - शाकाहारी काम छैन भन्नुको अर्थ चिकेन चिल्ली खान खोजेका हैनन् होला त : प्रधानमन्त्री
Home प्रमुख शाकाहारी काम छैन भन्नुको अर्थ चिकेन चिल्ली खान खोजेका हैनन् होला त...
सिराहा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिंसात्मक आन्दोलन गर्न लागेको बताएका छन् ।
प्रचण्डले अब शाकाहारी आन्दोलन गरेर काम छैन भनेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘भन्नुको मतलब मांसाहारी । मंसाहारी भनेको चिकेन चिल्ली खान खोजेको पक्कै होइन होला । उहाँले त हिंसात्मक आन्दोलन गर्न खोज्नुभएको छ । मान्छे मार्ने आन्दोलन गर्न खोज्नुभएको छ ।’
अबको नेपालमा त्यस्तो आन्दोलन सम्भव छैन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई त्यस्तो धृष्टता नगर्न सुझाब दिए । स्व. हेमनारायण यादवको १७ औं स्मृति सभाको अवसरमा सिराहा सदरमुकाममा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हिजो केपी ओली प्रधानमन्त्री थिएनन् । झुक्याउन सफल हुनुभयो होला । धेरै युवालाई सुन्दर सपना देखाएर लडाइँको मैदानमा सफल हुनुभएको होला । तर अब कोही अलमलिने वाला छैनन् ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले ४ माघमा आफू निकट विद्यार्थीहरुको भेलालाई सम्बोधन गर्दै शाकाहारी आन्दोलनले मात्र पुग्ने देखिँदैन, आक्रामक हुनुप-यो’ भनेका थिए । त्यसको आलोचना भएपछि उनले आफ्नो आशय हिंसात्मक आन्दोलन नभएको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद पुनर्स्थापना नहुने दाबी गरे । ‘संसद बिघटनलाई असंवैधानिक रहेको तर्क वितर्क गरिरहका छन्,’ उनले भने, ‘संसद विघटन संवैधानिकै छ ।’ नयाँ जनादेशबाट सरकार बन्नुपर्ने भन्दै उनले प्रदेश २ मा पहिलो चरणमै निर्वाचन हुने समेत बताए ।
प्रदेश ३ Sushila Bishwokarma - July 4, 2020 0
ललितपुर । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले चलिरहेको समस्या समाधान गर्न कम्युनिष्ट पार्टी सक्षम रहेको बताएकी छन् । सत्तारुढ...
प्रमुख Dhruba Lamsal - October 2, 2020 0
एसईई परीक्षामा बागलुङबाट ५ हजार विद्यार्थी सहभागी हुने
प्रदेश ४ Sushila Bishwokarma - March 16, 2020 0
बागलुङ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसईई परीक्षामा बागलुङ जिल्लाबाट झन्डै पाँच हजार बढी परीक्षार्थी सहभागी हुने भएका छन् । आगामी चैत ६ गतेबाट...
मुम्बई । बलिउड अभिनेत्री जान्ह्वी कपूर र उनका पिता एवम निर्माता बोनी कपुरले आफुहरुमा कोरोना संक्रमण नदेखिएको बताएका छन् । आफुहरुको परिवारमा अरुलाई पनि...
काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप २४६ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता...
Breaking News Dhruba Lamsal - July 28, 2020 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवास भैँसेपाटी पुगेका छन् । उनको साथमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलल पनि छन् । नेकपामा...